Intengiso yaBantu kuThengiso loMxholo: Iingcebiso ezi-4 namaqhinga | Martech Zone
Ukuthengisa umxholo ukuyo yonke indawo kwaye kuya kusiba nzima ukuguqula amathemba kubathengi abasisigxina kwezi ntsuku. Ishishini eliqhelekileyo alinakufezekisa nantoni na ngeendlela zokupasa ezihlawulelweyo, kodwa linokukhulisa ngempumelelo ulwazi kunye nokuqhuba ingeniso lisebenzisa intengiso yemveli.
Ayisiyongcinga intsha le kwi-intanethi, kodwa uninzi lweempawu zisasilela ukuluxhaphaza ngokupheleleyo. Benza impazamo enkulu njengoko intengiso yemveli ibonisa ukuba yenye yezona ndlela zokwenza inzuzo ezinokuphantse ziqinisekise ukuhambisa imbuyekezo oyifunayo kutyalo-mali.
Kodwa isebenza njani? Ngaba unokwenza ibhalansi elungileyo phakathi kwentengiso yemveli kunye nokuthengisa umxholo? Ukuba awuqinisekanga ngokwenyani ukuba ungayiphendula njani le mibuzo mibini, qhubeka ufunda ukuze ufunde imigaqo esisiseko yentengiso yemveli kwintengiso yomxholo.
Akukho mfihlo yokuba ukuthengisa umxholo kulawula indalo yedijithali, kodwa uthini ngentengiso yemveli? Ukuba ufuna ngenene ukwazi ukuba isebenza njani, kufuneka uqonde ukuba kuthetha ntoni kwaye ujonge izibalo ezisisiseko kule ndima.
Yintoni iNtengiso yeNative?
Intengiso yemveli kukusetyenziswa kweentengiso ezihlawulelweyo ezingqinelana nembonakalo, imvakalelo kunye nomsebenzi wefomathi yemithombo yeendaba ezibonakala ngayo. Uya kuhlala ubona iintengiso zemveli njengeenxalenye zemithombo yeendaba zosasazo lweendaba okanye kwiiwebhusayithi zakho ozithandayo njengezindululo zenqaku.
Izibalo zeNtengiso zaBantu
Ezi fomathi zomxholo zifana nokhetho oluqhelekileyo lokuhlelwa kweqonga lonxibelelwano elinikiweyo. Yiyo kanye le nto eyenza ukuba intengiso yemveli isebenze kwaye ithembeke:
Iintengiso zemveli zivelisa izinga lokucofa (CTR) amaxesha 8.8 ngaphezulu kweentengiso eziqhelekileyo zokubonisa.
70% yabathengi ukhetha ukufunda malunga neemveliso ngomxholo kunentengiso yesiko.
Isibini kwisithathu sabasebenzisi sifumana Umxholo ophakanyisiweyo ukuba lolona hlobo luncedo kwintengiso yemveli.
Abathengisi baseMelika bachitha phantse zonke $ 44 billion Kwiintengiso zemveli minyaka le.
Izibonelelo zoThengiso lwaBantu kuThengiso loMxholo
Intengiso yemveli ngokucacileyo inamandla, kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba iza nobubanzi beenzuzo ezibonakalayo. Nazi izibonelelo eziphambili zentengiso yemveli kwintengiso yomxholo:
Iintengiso zomthonyama azihambelani: Ngokungafaniyo nezinye iifom zokunyusa, iintengiso zalapha ekhaya ziyasebenziseka kwaye aziphazamisi. Njengokuba igama libonisa, ezo ntengiso zibonakala ngathi zezendalo kunye nezinto eziphilayo, ezenza ukuba zithandeke ngakumbi kunezibhengezo ze-banner okanye iipopups.
Iintengiso zendalo zithembekile: Abantu bahlala becinga ukuba iintengiso zemveli zinokuthenjwa kwaye zinokuthenjwa. Ayothusi, ngakumbi ukuba wenza umxube ogqibeleleyo wentengiso kunye nentengiso yomxholo. Kule meko, unokuchukumisa kuphela abaphulaphuli ngomxholo wokukhuthaza wokuqonda.
I-CTR ephezulu: Iintengiso zendalo zinenqanaba eliphezulu lokucofa (CTR) kuneefom zentengiso eziqhelekileyo, esisiphumo sokuthembeka nokuthembeka kwazo. Olu hlobo lwentengiso alunyanzelisi kakhulu, ke abasebenzisi abalukhathaleli ukusebenzisa umxholo kunye nokuzibandakanya nawo ekugqibeleni.
Iintengiso zendalo zilungele wonke umntu: Umdibaniso wentengiso yemveli kunye nokuyila umxholo ulunge ngokufanelekileyo kubo bonke abantu ababandakanyekayo kwishishini. Abathengi bayayithanda kuba ihambisa umxholo, kodwa abavakalisi bayayithanda kuba ayiphazamisi izithuba eziphilayo. Okokugqibela, abathengisi bayayithanda intengiso yemveli kuba ihambisa iziphumo ezijolise kuzo.
Intengiso yemveli ilingana nawo onke amaqonga: Ungapapasha iintengiso zemveli phantse kuwo onke amajelo onxibelelwano akhona. Ukusuka kwimidiya yoluntu kunye nakwiwebhusayithi ukuya kumaphephancwadi emveli kunye neencwadana ezinemifanekiso, intengiso yemveli iyasebenza kubo bonke abalamli.
Iindlela ezi-4 zokuphucula iiNtengiso zeMveli
Ngoku ukuba uyaziqonda iimpawu ezibalulekileyo zentengiso yemveli, ekuphela kwento eseleyo kukufunda indlela yokuyihlanganisa kunye nomzamo wakho wokuthengisa. Silungiselela uluhlu lwakho lweengcebiso ezine kunye namaqhinga:
Icebiso # 1: Kwenze nabaphulaphuli engqondweni yakho
Umgaqo wokuqala wentengiso yemveli ayifanelanga ukuba yi-brand-centric kwaye ubhale nabantu ekujoliswe kubo engqondweni yakho. Ungalibali ukuba iintengiso zomthonyama eziqhuba kakuhle aziyonto ingaphezulu kwesiqwenga somxholo esikhuthaza abafundi ngokuzimisela okukhulu kunye nomgangatho.
Umsebenzi wakho kukuhlalutya umdla wamathemba akho kwaye ujonge kwizihloko ezihambelana nolindelo lwabo, amathemba, iimfuno kunye neenkolelo.
UJake Gardner, an umniki-sabelo at Iinkonzo zokubhala zobungcali, ithi kubalulekile ukuqonda indlela abathengi abacinga ngayo ngombandela othile: “Zama ukufumanisa iingxaki abajongana nazo. Ngale ndlela, unokulungiselela umxholo okwinqanaba eliphezulu okhuthaza abantu ukuba bathathe amanyathelo xa befunda. ”
Kwangelo xesha, kuya kufuneka ucinge ngezona ndlela zokuhambisa zihamba phambili. Ngaba uyafuna ukubonisa iintengiso ngothungelwano lwentlalo okanye uhambe namaphepha acetyiswayo? Ingcebiso yethu kukusebenzisa ishaneli owaziyo ukuba inokufikelela ikakhulu kubaphulaphuli bakho.
Icebiso # 2: Yenza iikopi ezimeleyo
Uninzi lwabathengisi luthatha icebo lesibini njengelibalulekileyo njengoko lisenza wonke umahluko phakathi kwemikhankaso ephumeleleyo kunye nentengiso engaqhubi kakuhle. Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka wenze konke okufunekayo ukulungiselela ikopi yokuma kwintengiso nganye yemveli ngokwahlukeneyo.
Okokuqala, umxholo kufuneka ube nolwazi kakhulu, ufundise, kunye / okanye ukonwabisa. Okwesibini, iintengiso zendalo kulindeleke ukuba zibe nenjongo kwaye zingakhethi. Inqaku kukwenza izigqibo eziqhutywa yidatha kunye nokuxhasa iingxelo zakho ngobungqina.
Kwangelo xesha, iiposti zakho kufuneka zigqibelele malunga nopelo kunye negrama. Impazamo enye inokulonakalisa igama lakho, kungoko ungakhangela umxholo ngamnye kabini ngaphambi kokuba uphile. Ukuba ukufundwa kwakhona akuyiyo eyona nto yakho, sikukhuthaza ngamandla ukuba usebenzise amaqonga edijithali afana Igrama or Hemingway.
Icebiso # 3: Lungiselela iphepha lokufika
Eyona njongo yazo zonke iintengiso zemveli kukuthumela abasebenzisi kwiphepha elihambelanayo lokufika. Kwiimeko ezinjalo, kuya kufuneka uqiniseke ukuba iphepha lakho lokufika ngokuqinisekileyo lihambelana nomyalezo womxholo owenzileyo.
Kubalulekile ukusebenzisa isitayile esinye kunye neethoni yokubhala ukuze kuqinisekiswe inqanaba elifanelekileyo lokungqinisisa uphawu. Ewe kunjalo, iphepha lokufika kufuneka likhuthaze imveliso okanye inkonzo amathemba akho afundwe ngawo.
Okokugqibela, eli phepha kufuneka liqulathe umnxeba ocacileyo kwaye ubonakale kakhulu kwisenzo (i-CTA). Iqhosha le-CTA elibekwe kakuhle linika iindwendwe izikhombisi ezongezelelweyo kwaye libabonisa indlela yokuzibandakanya ekumeleni.
Icebiso # 4: Linganisa ukuphucula
Ingcebiso yokugqibela kuluhlu lwethu kukulinganisa iziphumo zomxholo wentengiso yakho yemveli kuba kuphela kwendlela yokuphucula iikhankaso ezizayo. Lo msebenzi ulula ngakumbi ukuba ubeka iinjongo ezifanelekileyo kunye nokuchonga izalathi zentsebenzo eziphambili (KPI).
Ngokubanzi, uninzi lwabathengisi lujolise kwiiparameter ezimbini-ukujonga kunye nokucofa. Ngelixa ii-KPIs ezimbini zibaluleke ngokwenene, sicebisa ukuba sigxile kwinto yesithathu etyhila ngokuthe ngqo impumelelo okanye ukusilela kwephulo lakho. Sithetha ngokubandakanyeka emva kokucofa, ipharamitha ephambili ebonisa ngokucacileyo ukusebenza kwentengiso yemveli.
Ukudalwa kokuqulathiweyo yenye yezona zinto zinomdla kakhulu kwintengiso yexesha lethu, kodwa akukho lula ukufumana indawo yakho kwilanga ledijithali elinabantu abaninzi okhuphisana nabo kuyo yonke indawo. Kulapho amanyathelo entengiso endalo ekuncedeni amashishini ekunyuseni ukuzibandakanya kwabasebenzisi.
Kule posi, sichaze umxholo wentengiso yemveli kwaye sikubonise iindlela ezine zokudibanisa ngempumelelo kunye nentengiso yomxholo. Kuya kufuneka usebenzise ezi ngcebiso kunye namacebo okuyila amaphulo angcono okuthengisa, kodwa qiniseka ukubhala ingxelo ukuba ufuna ezinye iingcebiso kwicala lethu-singavuya ukuphendula!
tags: intengiso yemveliInkcazo yentengiso yemveliizibalo zentengiso zomthonyamaiingcebiso zentengiso zomthonyamaiintengiso zomthonyamaukukhuphaImidiya yokuncokolaUmxholo ophakanyisiweyo